UBheki Cele uphuza itiye noZuma | Scrolla Izindaba
UBheki Cele uphuza itiye noZuma
UNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnuz uBheki Cele kulindeleke ukuthi avakashele lowo owayengumengameli wezwe, uMnuz uJacob Zuma namuhlanje emzini wakhe oseNkandla.
Izindaba zokuvakasha kukaCele emzini kaZuma zimenyezelwe ngusomlomo wakhe uLiradzu Themba namhlanje ekuseni.
Akucaci noma uCele uyovakashela uZuma njengomuntu onesikhundleni sokuba ngungqongqoshe noma njengelungu lesigungu esiphezulu se-ANC.
Ukuyovakasha kwakhe kuza ngesikhathi uZuma edelela iNkantolo yoMthethosisekelo eyalele ukuthi avele phambi kwekhomishini ephenya ukulawulwa kombuso yindlanzana kuleli sonto.
Njengoba uZuma ebhekene necala lokudelela inkantolo, maningi amathuba okuthi amaphoyisa aphoqeleke ukuba abophe lowo owayengumengameli kubuka umhlaba wonke kumabonakude.
Abathembekile kuZuma okuhlanganisa iqembu eligqoke izimpahla zempi elizibiza ngoMakadebona boMkhonto weSizwe balele ngaphandle komuzi wakhe, ngenhloso yokuvimba noma yimiphi imizamo yokumbopha.
UZuma uhlasele abezomthetho ekuqaleni kwaleli sonto, ethi bamqondile, wafunga wathi uncamela ukubhadla ejele kunokuziveza kwikhomishini, eholwa yiPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo.
UZuma kulindeleke ukuthi avele eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngoLwesibili ngamacala enkohlakalo, ukukhwabanisa nokushushumbisa imali ngezinsolo zokubandakanyeka kwakhe kumkhonyovu wokudayisa izikhali ngasekupheleni kweminyaka yango-1990.
UCele ubengomunye wabaholi abaphezulu be-ANC abebephumele obala bethi uZuma kumele ehle esikhundleni, nokuyinto agcine eyenzile ngowe-2018.
Waphinde futhi wakhankasela obala ukuthi uCyril Ramaphosa akhethwe njengomengameli weqembu ngaphambi kwengqungquthela yokukhetha ubuholi yeqembu yowezi-2017, ayinqoba.
Umfowabo kaZuma uKhanya uthe, wonke umuntu wamukelekile eNkandla noma ngabe bayizitha noma bangabahlanganyeli balowo owayengumengameli.
“Iminyango yethu ivuliwe futhi wonke umuntu wamukelekile lapha. Siwumndeni onothando,” kusho uKhanya.
Abantu abaningi abaqavile okubalwa kubo umholi we-EFF uJulius Malema ubevakashele uZuma emzini wakhe oseNkandla ogadwe amabutho ahlomile.
UCele kulindeleke ukuthi atshele abezindaba mayelana nohamba lwakhe ngemuva komhlangano wakhe noZuma.